Dad laga badbaadiyay Boko Xaraam - BBC News Somali
Dad laga badbaadiyay Boko Xaraam
Image caption Haween ku banaanbaxaya waddanka Nigeria oo dalbanaya in lasii daayo gabdhihii iskuulayda ahaa ee la afduubtay
Waxaa jira warar sheegaya in ciidammada Chad ay sii daayeen tobanaan qof oo rag iyo dumar isugu jira, dadkaasi oo ay afduubteen todobaadkii hore maleeshiyo laga shakisan yahay inay yihiin islaamiyiin oo ku sugan dalka dariska la ah ee Nigeria.
Dadkaasi waxaa laga soo afduubtay tuulo ku taal meel u dhaw Harada Chad.
Arrintan ayaa imanaysa afar bilood kaddib markii in ka badan 200 oo gabdho iskuulay ah laga afduubtay iskuul ay ku xareysnaayeen oo ku yaalla waqooyi bari Nigeria.
Saraakiisha ammaanka ee Nigeria ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Faransiiska, in 85 qof oo isugu jira rag iyo haween la soo badbaadiyay kaddib markii ciidammada Chad ay joojiyeen kolonyo basas ah oo ay wateen rag hubeysan oo ka tirsan kooxda Boko Xaraam.
Arrintan ayaa imanaysa lix maalmood un kaddib markii tobaneeyo qof oo isugu jira rag, haween iyo carruur laga afduubtay Doron Baga oo ah tuulo laga kaluumaysto oo ku taal baadiyaha shishe ee Nigeria una dhaw Harada Chad.
28 qof ayaa la dilay intii uu socday dagaalka.
Milateriga Nigeria ma aanay soo saarin war rasmi ah oo ku aadan weerarka, mana aanay noo suurtagalin in aanu si madax banaan u xaqiijino wararka sheegaya in dadkaasi la badbaadiyay.
Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in in ka badan 4,000 oo qof ay ku dhinteen weerarada kooxda Boko Xaraam ay gaysatay sanadkan.
Kooxdaasi ayaa waxa ay bishii Abriil afduubatay in ka badan 200 oo gabdho iskuuleey ah.
Gabdhahaasi oo weli la la’yahay.
Haweenka Nigeria oo dibad baxaya
12 Agoosto 2014
Haween ka baxsaday Boko Xaram
7 Luulyo 2014
Nigeria:Dumar lala Xiriiriyey Boko Haram
5 Luulyo 2014